Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Dalka oo qaabilay wafdi ka socda Dowaladda Talyaaniga – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Dalka oo qaabilay wafdi ka socda Dowaladda Talyaaniga
Muqdisho(SONNA) Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamedc Guuleed(Khadar) ayaa shalay qaabilay wafdi ay hoggaaminayso ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga Caalamiga ah ee Dalka Talyaaniga Ms. Emanuela Claudia Del Re oo soo gaartay magaalada Muqdisho.
Ugu horeyn waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyey mas’uuliyiin uu kamid yahay wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Khayre.
Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka HE Ms. Emanuela Claudia Del Re ayaa ka wada hadlay arrimo ay kamid yihiin xoojinta xiriirka u dhexeeya labada dhinac,sida iskaashiga iyo wax wada qabsiga danaha labada dal.
Dhanka kale wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya ayaa la kulmay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Talyaaniga,waxaana ay ka wada hadleen sidii dowladda Talyaaniga ay u taageeri lahaya horumarinta dhanka waxbarashada Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa aay isla soo hadal qaadeen taageeridda iyo fursadaha waxbarasho ee lacag la’aanta ah ee ardayda Soomaaliyeed,barnaamijyo lagu horumarinayo Jaamacadda Umadda.
Dowladda Talyaaniga ayaaa kamid ah dowladaha taageera Soomaaliya,waxaana xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Talyaaniga uu yahay mid soo jireen ah.